ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကပြွီးပါပွီ။ မီးတိုငျလညျးစိုကျပွီးပါပွီ …ဆိုတဲ့ မွကှေကျတှဝေယျမယျဆိုရငျ . .ဒါလေးအရငျဖတျပါ – Youth Bar
ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကပြွီးပါပွီ။ မီးတိုငျလညျးစိုကျပွီးပါပွီ …ဆိုတဲ့ မွကှေကျတှဝေယျမယျဆိုရငျ . .ဒါလေးအရငျဖတျပါ
ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကပြွီးပါပွီ။ မီးတိုငျလညျးစိုကျပွီးပါပွီ …ဆိုတဲ့ မွကှေကျတှဝေယျမယျဆိုရငျ . .ဒါလေးအရငျဖတျပါ”
ပုံစံ(၂) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူတို့က ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ။
ပုံစံ (၂-က) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် အမည်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူတို့က ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ။
ပုံစံ(၁၀) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးရန်လျှောက်လွှာ ။
ပုံစံ(၁၄) လယ်ယာမြေ အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ(နယ်မှာရချင်ရမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာလုံးဝခွင့်မပြု)(ရန်ကုန်တိုင်းမှာအခြားနည်းသုံးခွင့်ကရွာထဲရောက်နေတဲ့။ရွာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုအိမ်ဆောက်နေဘို့တိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်ရင်ခွင့်ပြုတယ်။
ပုံစံ(၁၅) လယ်ယာမြေမှတစ်ပါး အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့် ။(ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုတိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်ပြီးအိမ်ဆောက်နေမယ်ဆိုဒီပုံစံသုံးပြီးခွင့်ပြုတယ်။ဒါကလည်းရွာနဲ့ဆက်စပ်နေမှနော်။သီးခြားကြီးဖြစ်နေရင်တိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်မရဘူး)
ပုံစံ(၁၇) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် မြေနုကျွန်းမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံစာရင်း။လယ်သမားအချင်းလယ်ရောင်းတော့လယ်ဝယ်သူကပုံစံ-၉နဲ့ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရလုပ်တာကိုရောကြိတ်ပြီးအမည်ပြောင်းပါတခါတည်းလျှောက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးဖိန့်သေးသဗျ။
အရမျးစားလို့ကောငျးတဲ့ ငါးသလောကျ အရိုးနူးအောငျ ပေါငျးနညျးလေး